ngemibhobho steel China engenan- for boilers eliphezulu xi GB / T5310-2017 Standard nomakhi kunye Supplier | Gold Sanon
Grade Group: 20G, 20MnG, 25MnG, etc
Ububanzi engaphandle (Round): 10 - 1200 mm
Ubude: Fixed ubude okanye ubude random (6-12m)
Ukusetyenziswa: Boiler nobushushu umzimba
Test: ECT / UT / Hydrau Static
Oku ikakhulu kusetyenziswa ukwenza carbon ezikumgangatho ophezulu zokwakha, ingxubevange zokwakha kunye nemibhobho stainless olungenazimfanta kuhlinzwa ubushushu-resistant uxinzelelo oluphezulu nangaphezulu imibhobho kwibhoyila umphunga.
ezisetyenziselwa ikakhulu uxinzelelo ophezulu kunye nenkonzo eliphezulu lobushushu kwibhoyila (Superheater ityhubhu, reheater tube, isikhokelo umoya tube, ityhubhu umphunga esingundoqo boilers eziphakamileyo ultra koxinzelelo oluphezulu). Phantsi isenzo lobushushu eliphezulu igesi ulwelo kunye nomphunga wamanzi, ityhubhu uya oxidize kunye ezinokudla. Kulindeleke ukuba umbhobho sentsimbi lwale ihlala phezulu, ukumelana phezulu ukuya igcwala umhlwa, kunye nozinzo entle.
Grade le carbon ezikumgangatho ophezulu zokwakha: 20g, 20mng, 25mng
Grade ingxubevange zokwakha: 15mog, 20mog, 12crmog, 15crmog, 12cr2mog, 12crmovg, 12cr3movsitib, etc
Grade ngensimbi ubushushu-enganyangekiyo umhlwa-resistant: 1cr18ni9 1cr18ni11nb
J Ukuba umthengisi unako ukuqinisekisa ukuba umxholo nitrogen uyahlangabezana neemfuneko kwitheyibhile, uhlalutyo lomxholo nitrogen akufunekanga ukwenziwa. Ukuba Al, yesiqephu, V, Ti kunye nezinye izinto ingxubevange kunye nitrogen nitrogen ezidityaniswe ngentsimbi, isiqulatho nitrogen kuphela. Umxholo kuba ngundaba-nitrogen kufuneka zicaciswe kwisiqinisekiso esemgangathweni.
'Xa usebenzisa yonke aluminiyam, iyonke Ait isiqulatho aluminiyam ^ 0,020% B
Wall Ubukhulu kanye Outter Ububanzi:
Ukuba akukho iimfuno ezizodwa, nelogwali, ngob ukuziswa ubukhulu outter norminal kwaye norminal nodonga ubukhulu. Njengoko sheet ulandela
Indlela zemisebenzi yezandla
Hot asongwe (extrude) Umbhobho
Norminal outter Ububanzi
+ 1% D okanye + 5.Take oziphatha 一 2
+ 1% D okanye + 7, Thabatha oziphatha 一 2
Norminal Wall Ubukhulu
pipe ukwanda emhlabeni
Ingqele azotywe (wasusa)
Ubude zisaqhubeka Imibhobho ephakathi yentsimbi yi-4 000 mm ~ 12 000 mm. Emva kothetha-thethwano phakathi umthengisi kunye nomthengi, kunye fill kule mvumelwano, oko kuhlangulwa imibhobho kuhlinzwa omkhulu ubude kwama-12 000 mm okanye elifutshane kunokuba 000 mm kodwa mfutshane kwe-3 000 mm; ubude emfutshane Inani lemibhobho zentsimbi ngaphantsi kwama-4,000 mm kodwa hayi ngaphantsi kwe 3,000 mm aluyi kuba ngaphezu kwe-5% yenani lilonke Imibhobho ephakathi yentsimbi kusiwa
Xa umbhobho intsimbi le nto mayihanjiswe ukuya enobubanzi engaphandle nencinane nodonga ubukhulu okanye enobubanzi yangaphakathi nencinane udonga ubukhulu, umbhobho intsimbi le nto mayihanjiswe ubunzima eyiyo. Kananjalo kusiwa ubunzima theoretical component.
Xa umbhobho steel le nto mayihanjiswe eliyimali engaphandle ubukhulu kunye ubuncinane udonga ubukhulu, umbhobho intsimbi le nto mayihanjiswe ubunzima eyiyo; amaqela sonikezelo kunye nemfuno ezingxoxweni. Kwaye oko kubonisiwe kwisivumelwano. Umbhobho steel kwakhona kusiwa ubunzima theoretical component.
Ngokutsho iimfuno salowo uyithengileyo, emva kokubonisana phakathi umthengisi kunye umthengi, kwaye kule mvumelwano, ukuphambuka phakathi ubunzima yokoqobo ubunzima nemiqathango umbhobho sentsimbi unikezelo iya kuhlangana ezi mfuno zilandelayo:
a) sentsimbi Single pipe: ± 10%;
b) Ibhetshi nganye ngemibhobho kuhlinzwa ubukhulu ubuncinane 10 t: ± 7.5%.
Umbhobho steel kufuneka avavanywe hydraulically enye kwenye. Uxinzelelo iphezulu vavanyo 20 MPA. Phantsi uxinzelelo test, ixesha uzinziso kufuneka ungabi ngaphantsi kwe-10 ubudala, nogwali intsimbi kufuneka kugquma.
Emva kokuba umsebenzisi uyavuma, uvavanyo hydraulic singavalwa ngokuhlola eddy ngoku okanye uvavanyo ngemagnethi ukuvuza ukubhobhoza.
Imibhobho ezifuna uhlolo ngakumbi kufuneka ultrasonically zihlolwe nganye nganye. Emva kokuba thethwano kufuna imvume zeqela kwaye kucacisiwe isivumelwano, enye uvavanyo non-etshabalalisayo inokongezwa.
Ngemibhobho kunye ubukhulu enkulu engaphandle kwe-22 mm oyakuphathwa gadalala uvavanyo flattening. Akukho delamination ebonakalayo, amatshatshazi amhlophe, okanye ubumdaka kufuneka kwenzeke ngexesha lonke nokuhlola.
Ngokutsho iimfuno salowo uyithengileyo kwaye kuchaziwe kwisivumelwano, umbhobho intsimbi kunye ≤76mm ubukhulu engaphandle nodonga ubukhulu ≤8mm kunokwenziwa lokudlabhuka uvavanyo. Le lokulinga kwenziwa bushushu kunye Taper-60 °. Emva kokuba lokudlabhuka, izinga lokudlabhuka le ubukhulu engaphandle kufuneka ihlangabezane neemfuno theyibhile ilandelayo, kwaye ke izinto uvavanyo kufuneka ubonise iintanda okanye rips
Outter ububanzi izinga ipipi sentsimbi lokudlabhuka /%
Ububanzi kwangaphakathi / Outter Ububanzi
Ophezulu ezikumgangatho carbon zokwakha
Structural ingxubevange steel
• I-enobubanzi engaphakathi ibalwa kwisampula.
Boilers nokujika Steel iityhubhu For High-Ingcinezelo
Previous: Isishwankathelo ipipi Boiler
Okulandelayo: edition 46th Carbon engenan- Steel Line Pipe APISPEC5L-2012
Hot asongwe Tube engenan- Steel